हाम्रो मूल संस्कृति किन प्रभावित भइरहेको छ ? - Abhiyan news
हाम्रो मूल संस्कृति किन प्रभावित भइरहेको छ ?
२७ श्रावण २०७८, बुधबार ११:१२ अभियान न्यूजLeaveaComment on हाम्रो मूल संस्कृति किन प्रभावित भइरहेको छ ?
साम्राज्यवादको सांस्कृतिक पक्षलाई सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भनिन्छ। शक्तिशाली सभ्यताको पक्षमा दुई सभ्यता बीच असमान सम्बन्धलाई साम्राज्यवाद भनिन्छ। नेपालमा पनि यसले दशकौदेखि प्रभाव परेको देखिन्छ। सांस्कृतिक आधिपत्य, नातावाद आदि आजका प्रवृत्ति बनेका छन् र यिनीहरूले सांस्कृतिक साम्राज्यवादलाई मद्दतका साथै स्थापित गरिरहेको छ। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद दिन प्रतिदिन बढ्दै छ जसको कारण हाम्रो मूल संस्कृति प्रभावित भइरहेको छ।
आज विज्ञान र प्रविधिको विकासले पूरा विश्व एउटा गाउँ जस्तो भएको छ। मानिसहरू विभिन्न कारणले आफ्नो मातृभूमि त्यागेर बाहिरिएका छन्। मानिसहरू विभिन्न कारणले बाहिरिनु नै साम्राज्यवादको प्रमुख कारण बनेको छ। ती विदेशिएका मानिसहरू र उनीहरूको परिवारमा बसाइएको भूमिको प्रभाव पर्छ। अर्कोतर्फ नेपाल अल्पविकसित मुलुक भएकाले विभिन्न कारणले अरू मुलुकमा आश्रित छ जसको कारण पनि सांस्कृतिक साम्राज्यवादमा बढिरहेको छ।
सांस्कृतिक साम्राज्यवादले हाम्रो सनातन संस्कृतिमा चासो घटाएको छ। पश्चिमी मूल संस्कृति सबैभन्दा चाखलाग्दो र रूचाइएको जीवनशैली भनेको छ। हामीहरू पश्चिमी संस्कृतिसँग यति व्याकुल भएका छौ कि हामीहरू आफ्नै संस्कृति बिर्सिन थालेका छौं जसले गर्दा हाम्रो आफ्नो भाषा संस्कृतिको लोप हुँदै गएको छ। हामी हाम्रो संस्कृति र परम्परा भुलेर यसलाई अन्धविश्वास भनी पश्चिमी शैलीमा दैनिक जीवन जिउँदै छौ। तर भुली रहेका छौ कि हाम्रो परम्परा र संस्कृति वैज्ञानिक आधारमा पनि सही छ।
आज कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण हामीले प्रयोग गर्न हिच्किचाइरहेका विभिन्न रितिहरू कोरोना भाइरस निवारण गर्ने तरिका बनेको छ। जहाँ हामी सबै पश्चिमी रिति अँगाल्दै व्यस्त छौं। त्यही विश्व हाम्रो संस्कृति अपनाइरहेको छ। जसले यो सिद्ध गर्छ कि हाम्रो ती नमस्कार गर्ने, बच्चालाई आगोमा हात सेकाइएर छुने, आर्यघाटबाट फर्केर ननुहाई घर नपस्ने, हात टाउकोमा नलग्नी जस्ता हाम्रा परम्पराहरू हाम्रो हितका लागि नै बनाइएको रहेछ।
हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छ भनेझैं सांस्कृतिक साम्राज्यवादले सकरात्मक एजेन्डाको र समान अधिकारको प्रचार गर्नका साथसाथै खराब समाजिक मान्यता र अभ्यास हटाउन मद्धत गर्छ। -आस्था रिमाल
एसीसीलाई अघि नबढाउने सभामुखको स्पष्ट संकेत
१९ पुष २०७८, सोमबार ०२:३१ अभियान न्यूज
आज बडा दशैंको दोस्रो दिन, देशभरका शक्तिपीठमा ब्रह्मचारिणी देवीको पूजा गरिँदै
२२ आश्विन २०७८, शुक्रबार ०३:१३ अभियान न्यूज